Idiris oo qabay cudurka autism-ka oo geeriyooday saacad ka dib markii la geeyey hooy xanaano ah | Somaliska
Booliska dalka Iswiidhan ayaa baaraya geerida wiil soomaaliyeed oo ku geeriyooday deeganka Upplands Väsby, wiilkan oo lugu magacaabo Idiris oo sideed iyo toban jir ah ayaa geeriyooday ka dib markii la dejiyey qoys qaas ah oo lugu xanaaneeyo.
“Haddii wiilkeeyga heli helaa taageerada uu u baahan yahay maanta waa noolaan lahaa” ayey tiri hooyo Canab oo ah hooyadda wiilkan dhashay oo la hadleeysay saxaafadda. Wiilkan, walaaladii iyo hooyadii ayaa dalka yimid sanad ka hor. Xaalad caafimad darro oo heeysa ayaa waxaa ku adag hadalka iyo kobaco o u sabab ah cudurka dhahaakaha ee autism-ka loo yaqaano. Reerka Idiris ka dhashay ayaa waxaa u dheeraa xaalad guri la’aan oo ku kaliftay ineey hadba meel garab rararo u noqdaan, markii dambe degay guri ku meel gaar ah.
“Waxan deganahay labbo qol waxaana ka koobanahay lix ruux oo hal qor isku cirriiriyey si Idiris u helo qal u gaar ah si uu helo deganaan, balse ay adkeyd” ayey tiri hooyada wiilkaasi dhashay.
Idiris waxaa uu bilaabay in uu ka dhuunto reerka inta badan, booliskuna ay soo qaban jireen. Xaaladda reerka oo marxalado kala duwan ka maray Idiris ayaa hooyadda dhashay waxaa ay sheegtay in ay dowladda ka codsatay in wiilkeeda la geeeyo iskuuladda qaaska ah (särskola) loona qabto qof saacida, balse ay taasi waqti dheer qaadatay. Baaritaano badan oo la sameeyey ayaa sheegay in Idiris u baahan yahay “dhaq dhaqaaq howlgelineed si uu deganaan u dareemo”.
Xaaladda wiilka oo aad u adkaatay ayaa keentay in marar badan la geeyey goobaha dhalinyaradda xagga maskaxda ka si ah la geeyo. Muddadii ay xaaladiisa sidaa u daala dhaceeysay Idiri maanu helin iskuul iyo taageero. Maalinba maalinta ka dii dambeeysa xaaldiisa oo sii xumaaneeysay booliska ayaa ka codsaday xafiiska arrimaha bulshadda in ay gacan ku qabtaan. Kuwaas oo ugu dambeyntii u helay qol guryaha ku meelka ahe ee qaaska ah (kortboande).
Saacad ka dib ayaa waxaa laga helay meydkiisa qolkii uu deganaa. Hooyadda wiilka dhashay ayaa dhacdadaan naxdinta leh ku tilmaanta mid eeysan aan la fahmi karin gacantii iyo taageeradii ay fileeysay oo ay weeyday keentay natiijada naxdinta leh.
Ugu dambeyntiina hooyadan ayaa codsatay in la baaro waxa sababay geerida wiilkeeda. Booliska ayaa sidoo kale eegga in ay salka ku heeyso dil loo geeystay iyo in kale. Xafiiska arrimaha bulshadana ( ceeyrta) waxaa dacwad ku soo oogay xarruntii Idiri gacanta ku heeysay oo qudhooda ka gabsaday eeda loo soo jeediyey ee waxa sababay geeridiisa.
Hooyo Canab oo ah hooyada dhashay marxuum Idiris. Sawirka: SVT
Saleh A says:
August 25, 2017 at 00:24
Qof ka Qoraalkan Qoray Iskuul ka dib ha ugu laabto !
Sidee igu micneen kartaaan Xafiiska arimaha bulshada(Ceyrta) Inta aynan bulashada wax u sharixin Af Somaliga Ha la barto
Sxbyaalow horta ilaahay hay naxariisto marxuumkaas hooyadiis iyo inagana ilahay samir haynaga siiyo aamiin
Maqaalkan qofkii qoray waxaan usheegi lahaa inuu saxo intaanu soo daabicin tusaale khaladadka aan hada arkay baan 4 kaliya kasoo qaadanayaa iyo waxaan is iri wuu ka waday
1- qoys qaas:- qoys khaas
2-kobaco:- ilaa hada ma fahmin
3-cudurka dhahaakaga:- ma fahmin
4- eegga:- eegaan
5-garab rararo:- garab rarato
Markaa inaga hagaajiya xogaagaa khaladaadka ah
Wax badan ayaa kaqaldan hada wala fahmikara assadullah
Dhakaag=autism waa eray cusub oo af Somalia sxb mardhow lasameeyay sas ufaham bro
allaha unaxariisto hooyo canabna allaha caloosheeda uqaboojiyo waa caloolxumo in eeysan caawinin ooy qol kaligiis geeyaan laakiin waa colkudhac tuuk hakuu ciidamiso!